इटालीमा कोरोनाका कारण महिलाभन्दा पुरुष किन बढि मरे ? यस्तो छ कारण - Aarthiknews
इटालीमा कोरोनाका कारण महिलाभन्दा पुरुष किन बढि मरे ? यस्तो छ कारण
काठमाडौं । भाइरसका केसहरू विश्वव्यापी रूपमा बढ्दैछन्। यस भाइरसले सबैभन्दा बढी प्रभावित देशहरूमा इटाली देखिएको छ। इटालीले पनि यस विषयमा चीनलाई पछाडि छोडेको छ। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार इटालीमा केवल एक दिनमा ६२७ जना कोरोनाको कारण मरे, जबकि ५९८६ नयाँ संक्रमणका घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको छ।
हालसम्म कोरोना भाइरसबाट मर्नेहरूको संख्या १० हजार ४ सय १८ भन्दा बढी पुगेको छन। यहाँ मर्ने पुरुषहरुको संख्या बढी छ। केही विज्ञहरू भन्छन कि पुरुषमा कोरोना भाइरसको जोखिम महिलाको तुलनामा बुढेसकालको जति बढी हुन्छ। केही त्यस्तै तथ्यांक पनि केहि दिन अघि चीनमा देखिएको थियो जहाँ पुरुषको मृत्यु कोभिड १९ भन्दा बढी थियो।
इटालीमा पनि पुरुषहरू महिलाभन्दा कोरोना भाइरसबाट बढी संक्रमित र मारिएका छन्। रोमको उच्च स्वास्थ्य संस्थानका अनुसार २५०८६ संक्रमित भएका मानिसमा पुरुष बिरामीहरूको ८ प्रतिशत महिला बिरामीहरूको तुलनामा कोरोना भाइरसको ५ घटना आएका थिए।
वैज्ञानिक र जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सब्रा क्लाइनले भने, पुरुषहरूमा कोरोना भाइरसको जोखिम जेष्ठ नागरिकमा जत्तिकै छ। व्यक्तिहरू सतर्क हुनु आवश्यक छ । स्यान्डबर्गले भने, महिलाको तुलनामा, मुटु र उच्च रक्तचाप जस्ता रोगहरू धेरै कम उमेरमा पुरुषहरूमा देखा पर्दछन् र यसले कुनै गम्भीर रोगको सम्भावना बढाउँदछ।
यसभन्दा पहिले, केही स्वास्थ्य विज्ञहरूले चेतावनी दिएका थिए कि धूम्रपान वा ई(सिगरेटले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई बढी खतरनाक बनाउन सक्छ।
वास्तवमा, धुम्रपानका कारण, फोक्सोमा सूजन र जलन शुरु हुन्छ। ई(सिगरेटले पनि शरीरलाई हानी गर्दछ। जो धेरै धूम्रपान गर्छन् र पछि ई-सिगरेट प्रयोग गर्छन् उनीहरूलाई फोक्सोको हानी हुने खतरा हुन्छ।
आइल्याण्डको न्यूयोर्क विन्थ्रोप अस्पतालका डाक्टर मेलोडी पीरजादा भन्छिन्, धूम्रपान गर्ने बानी भएका बिरामीहरूको फोक्सोले कोरोना भाइरसलाई बिगार्न सक्छ।चीनमा गरिएको एउटा अध्ययनका अनुसार पुरुषमा कोरोनो भाइरसको संक्रमण त्यहाँका महिलाहरूभन्दा बढी भएको थियो।
व्यक्तिहरूमा यो भिन्नता जैविक वा व्यवहारात्मक हुन सक्छ, क्लाइनले भने। एउटा अध्ययनका अनुसार महिलाको प्रतिरक्षा प्रणाली पुरुषहरू भन्दा शक्तिशाली छ। एकै साथ पुरुषहरूलाई बढी धूम्रपान गर्ने र हात कम धुने बानी छ भने पुरुषको प्रतिरक्षा प्रणाली कजोर देखिएको छ ।
कोरोना भाइरसप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै अमेरिकी डाक्टर डेबोरा बर्कले भने, इटालीमा मर्ने सबै उमेरका पुरुषहरूको संख्या महिलाको तुलनामा दुई गुणा छ। विशेष गरी ५० बर्षभन्दा माथिका पुरुषहरू बढी संक्रमित थिए।
महिलामा पाइने सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजेनले पनि प्रतिरोध क्षमता कायम राख्छ। एक्स क्रोमोसोमलाई एक प्रतिरक्षा जीन पनि मानिन्छ, जुन दुई महिलामा दुई र पुरुषमा केवल एक मात्र हुन्छ।
अमेरिकाको जर्जटाउन विश्वविद्यालयका निर्देशक क्याथरिन स्यान्डबर्ग भन्छिन् कि पुरुषको स्वास्थ्य र व्यवहारले पनि यस विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
यसभन्दा पहिले, केही स्वास्थ्य विज्ञहरूले चेतावनी दिएका थिए कि धूम्रपान वा ई(सिगरेटले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई बढी खतरनाक बनाउन सक्छ। चीनको मेडिकल पत्रिकामा प्रकाशित एउटा लेख अनुसार धूम्रपान गर्ने बानी कोभिड १९ का ७८ जना बिरामी धुम्रपानका पाईयो र ती सबैलाई निमोनिया थियो।
पीरजादाले भने, हाम्रो शरीरमा पातलो आकारको सिलिया हुन्छ, जो फोक्सोबाट विष र कफलाई निकाल्ने काम गर्दछ। धुम्रपानले यस सिलियालाई धेरै नोक्सान पुर्‍याउँछ।
उत्तर क्यारोलिना युनिभर्सिटीका माइक्रोबायोलॉजी एन्ड इम्युनोलजीका एसोसिएट प्रोफेसर रे पिकल्सले भने, भाइरस संक्रमित भएपछि शरीरमा धेरै चीजहरू हुन्छन्।
उनले भने, इन्फ्लूएन्जा वा कोरोनाभाइरस पछि, संक्रमित भए पछि मानिसहरूले शरीरमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ र जब चीज बिग्रन थाल्छ, अवस्था चिन्ताजनक हुन सक्छ।
चैपल हिलका जीवविज्ञानका प्राध्यापक रोबर्ट भन्छन्, धूम्रपानले इन्फ्लूएन्जाको जोखिमलाई बढाउँछ। मानिसहरू जो धूम्रपान गर्छन्, उनीहरूको प्रतिरक्षा प्रणाली केही हदसम्म कमजोर छ र उनीहरूसँग धेरै बलगम छ। तिनीहरूको फोक्सो पनि सफा छैन।
रोबर्टले भने, धेरै जो धूम्रपान गर्छन् उनीहरूको शरीरमा भाइरस फैलाउने सम्भावना बढी हुन्छ। भाइरस एक पटक शरीरमा फैल्यो भने, यसले धेरै खतरनाक परिणामहरू लिन सक्दछ। एजेन्सी